सवारी साधनलाई नो पार्किङ, जँड्याहालाई दिनभर सडकमा लम्पसार पर्न छुट ? यो के हो, मेयरज्यू ! – ebaglung.com
सवारी साधनलाई नो पार्किङ, जँड्याहालाई दिनभर सडकमा लम्पसार पर्न छुट ? यो के हो, मेयरज्यू !
२०७५ असार २२, शुक्रबार १५:५५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी १०७५ असार २२ । प्रहरीको विहानै देखि गाडीमा ओहर दोहर चलिरहेकै छ । उनिहरु पैदल गस्ती पनि गरिरहेका छन । शुक्रवार विहानै देखि र अहिले यो समाचार लेख्ने सयम ३ वजे सम्मको कुरा हो ।
गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास नयाँ वजारको सडक छेउँको दृश्य हो । जहाँ एक जना जाँडले ढलेका मजुर लडिरहेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? भनेर बुझ्ने कोही छैन । उनि मानिस हुन भन्ने सवैलाई थाहा छ । तर पनि उनलाई जसरी सडकमा एउटा कुकुर लडेको दृश्य केहि जस्तो लाग्दैन त्यस्तै ठानिएको छ ।
प्रहरी प्रशासन कै आँखा अगाडी एउटा जँड्याहा दिनैभरी जस्तो सडकमा लडिरहेको छ त्यसको खोजी हुँदैन भने दुर्गम गाउँका त्यस्तै जँड्याहरुलाई खोज्ने र सुररिक्षत गर्ने काम कसले गर्ला ?
कैयौ मानिस वाटो छेँउँमा त्यसरी नै सुतिरहेको अवस्थामा मृत्यु भएका छन । कोही भिरमा मृत फेला पर्छन । परिवारले हराएको उजुरी दिदा हप्तौं सम्म मृतकको शव पहिचान गर्न नसक्ने गरी सडेको हुन्छ ।
यसको उदाहरण हो– केहि वर्ष अघि यसै गुल्मीमा प्रहरीले जिवितलाई मृतक बनाएर अन्त्यष्टि गरेको थियो । हस्तीचौरका बृद्ध कृष्णबहादुर बिक मृतक बनाएर अन्त्यष्टि गरी सके पछि उनका आफन्त उनि तजीवित छन भन्दै आएका थिए ।
त्यसको केहि महिना पछि मात्र उनको मृत्यु भएको थियो । पछि फेरी अर्को मृतकको पहिचान नै हुन नसकी वेवरिसे शवका रुपमा अन्त्यष्टि गरिएको थियो । गरिव , मजदुर र सडक छापहरुको पनि कुनै कुनै आफन्त हुन्छन वा उसको जीवन पनि अरुको जस्तै जीवन हो ।
आखिर मदिरा न हो ? थेक्न नसकी पिउन थालेपछि उसको ज्यान जोखिमा हुन्छ । त्यस्तालाई सुरक्षित गर्ने प्रहरी मात्र होईन आम मानिसको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै समाचारदाताले उति बेलै उठाउन खोजेको थियो । तर कतै अन्यथा त हुने होईन भनेर छुन सकेन ।
यता रेसुङ्गा टेलिभिजन र त्यसको ठिक अगाडी शाईन रेसुङ्गा बिकास बैंक छ । मानिसहरुको आवत जावत बाख्लो छ । गजवको कुरा त के छ भने रेसुङ्गा नगरपालिकाले तम्घास वजार क्षेत्रमा ‘नो पार्किङ्ग’ अभियानलाई कडाईका साथ लागु गरेको छ ।
ती जँड्याहा मजदुर जहाँ लडिरहेका छन त्यहाँ मोटर साईकल पार्किङ्ग गर्न निषेध छ । तर मोटर साईकलले लिने ठाउँ भन्दा बढि ठाउँ ओगटेर जँड्या दिनभरी त्यसरी लड्न चाँही यस्तो छुट छ । उनले चाहेर वा नचाहेर यस नगरपालिका र प्रहरीलाई चुनौती दिए कै हो , होईन र ?
विशेष गरी पार्किङ्ग निषध अभियानलाई कडाईका साथ लागु गर्न कम्मर कसेका रेसुङ्गा नगरपालिका मेयर डिल्लीराज भुसाललाई सर्वसाधरणले यहि सवाल उठाएका छन कि, मेयर ज्यु, कुनै होटलमा छिरेर एकै छिन पिसाव फेरेर आउनका लागि मोटर साईकल रोक्न छुट छैन भने जँड्याहालाई दिनैभर त्यस्तो ब्यस्त सडक ओगटेर सुत्न त्यत्रो छुट ? जड्याँहाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको होईन ? अहिले पो जाँड खाएर बेहाल छन् त्यतिबेला तपाईलाईनै भोट दिएका हुन् कि ?
काठमाडौ देखी बलेवा रित्तै आयो नेपाल एयरलाईन्सको बिमान ! बिहीबारको उडानमा नपुग १८ जना यात्रुको हर्जाना बापत रु १ लाख ८ सय नगरबासीको टाउकोमा !